DAAWO: Dawladda Soomaaliya oo beenisay in ay joogsatay shaqadii xarun dawladeed oo la sheegay in ay Shabaab joojisay.
MUQDISHO(P-TIMES) – Shir jaraa’id oo ay si wadajir ah ugu qabteen gudaha garoonka ciyaaraha ee magaalada Muqdisho madax katirsan dawladda Faderaalka ee Soomaaliya ayay sheegeen in aysan waxba ka jirinw ararka sheegaya in ay Shabaab joojisay dhismaha dibu dayactirka garoonka kubadda Cagta ee magaalada Muqdisho.
Ra`iisulwasaare kuxigeenka dawladda Faderaalka Soomaaliya Mahdi Guuleed, Wasiirka Warfaafinta Maxamed Cabdi Maareeye, Wasiiradda Dhalinyaradda & Ciyaaraha Khadiijo Maxamed Diiriye iyo Gudoomiyaha gobalka Banaadir Cumar Maxamed Cumar Filish oo la hadlay warbaahinta dawladdu maamusho ayaa sheegay in aysan joogsan shaqada garoonka.
Xubnahan ayaa sheegay in wararkii la faafiyey ay ahaayeen kuwa been abuur ah oo la doonayey in lagu dhibaateeyo shaqada xaruntan dawladed ka socota, iyagoo sheegay in ay wadaan baaris kala duwan oo arrimahan la xariirta.
Warar hoose oo ay heshay warbaahinta gudaha ayaa shaaca ka qaadaysa in ay xaqiiqo tahay in la joojiyey dhismaha xarunta dibu dayactirka garoonka ciyaaraha ee magaalada Muqdisho, ayna socdaan dadaalo arrimahan ku wajahan dib loogu bilaabayo shaqada.
Dhismayaal kala duwan oo kuyaala magaalada Muqdisho ayay Shabaab joojiyeen dhismahooda, oo ay ku jiraan Hotelo caan ah oo kuyaala wadada ay dawladdu ku xoogan tahay ee Maka Al Mukarama, waxayna Hoteladaas mulkiilayaashooda u sheegeen Shabaab in haddii ay isku dayaan dib dhiskooda ay dumin doonaan.
Xukuumadda Soomaaliya ma ogolaanin in ay madasha ka hadlaan qaar kamid ah Qandaraaslayaashii shirkadaha ee dibu dhiska garoonkan qaatay, waxayna dad badan rumeysan yihiin in jiritaanka xogaha warbaahinta ay xaqiijin karaan ama beenin karaan shirkada Qandaraaska qaatay oo kaliya.